Kufanele sibhale nini inyanga, ilanga nomhlaba ngamagama amakhulu? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kwesinye isikhathi sibhala ngakho ilanga, umhlaba nenyanga, futhi kuya ngomongo lapho sikwenza khona, kufanele sisebenzise amagama amakhulu noma cha. Kunezikhathi lapho othisha becabanga ukupela kabi amagama kanti abanye abakwenzi.
Kufanele sizisebenzise nini izinhlamvu ezinkulu ukubhekisa kulezi zinto futhi kungani?
1 ILanga, umhlaba nenyanga
2 Ezinye izimo ezingezona ezomkhathi
ILanga, umhlaba nenyanga
Ezimweni zezinkanyezi, inyanga kumele ibe ngofeleba njengelanga noma umhlaba, ngoba sibhekisa kulezi zinto njengamagama wokuqamba izinto ezifanele. Kodwa-ke, lezi zinto sizibhala ngesibalo esincane, lapho sibhekisa ezinkanyezini uqobo noma ekusebenziseni okususelwe noma kokufaniswa.
Kunezimo lapho kungadingekile ukuthi zifakwe osonhlamvukazi. Isibonelo, emshweni othi "Ngiya olwandle ukugeza ilanga," akudingekile ukuthi igama elithi "ilanga" lifakwe osonhlamvukazi njengoba singabhekiseli elangeni njengegama elichazayo. Kodwa-ke, enkulumweni ethi "amaplanethi azungeza iLanga", kuyadingeka ukuthi kufakwe osonhlamvukazi, ngoba sibiza iLanga njengegama.
Ezinye izimo ezingezona ezomkhathi
Ngaphandle kwalezi zimo zezinkanyezi, ngokusetshenziswa okuqondile nakokutholakele noma okokufanisa, zibhalwe ngosonhlamvukazi abhalwe phansi ngokujwayelekile. Lesi sincomo sisebenza ikakhulukazi ezinkulumweni ezinjenge ukushiswa yilanga, ukuphuma kwelanga, kube yilanga, inyanga egcwele, inyanga entsha, ukukhanya kwenyanga, i-honeymoon, cela inyanga, ifa lomhlaba nokunye okufanayo, lapho kungadingeki ukugqama okunjengamamaki wokucaphuna noma omalukeke. Ground ibhalwa njalo ngamahlamvu amancane uma kukhulunywa ngomhlabathi: "Indiza ingahlala phansi."
Sengiphetha singasho ukuthi ngokwesayensi yezinkanyezi, iLanga, uMhlaba neNyanga kufakwa osonhlamvukazi ngoba kufana nokuthi amagama abo. Kufana nokufaka igama lakho kumakhasi amancane. Ngale ndlela, ngeke siphinde senze iphutha lapho sibabhala.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Kufanele sibhale nini inyanga, ilanga nomhlaba ngamagama amakhulu?